China ahaziri plastic injection ebu tooling nke n'ibu shei emepụta na suppliers |DTG
Ahaziri plastic injection ebu tooling nke n'ibu shei
Nke a bụ a n'ibu shei plastic injection ebu, ọ bụ ihe onwunwe bụ S136 HRC48-52, ebu oghere is1 * 1, ihe ebu ihe bụ S136H, ebu ndụ 500 puku ogbugba, injection okirikiri bụ 68 seconds.Its ngwaahịa elu roughness bụ SPI A2.
Ọ bụ igwe na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ, usoro onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ bụ mgbakọ nke ihe ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke a na-eji n'ụdị injection plastik nke na-agbanye plastik gbazere n'ime oghere nke ebu ahụ.… A na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ usoro na-emekarị na-agụnye a kpụ ọkụ n'ọnụ manifold na a ọnụ ọgụgụ nke kpụ ọkụ n'ọnụ nozzles.
Kedu ihe dị iche n'etiti onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ nwere ike oyi?
Ndị na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ na-eji skru nozzle nke otu gbọmgbọm na-enye nri na-eji mgbapụta, ebe ndị na-agba oyi na-eji ihe mkpuchi mechiri emechi, thermoset ebu.Ọrụ bụ isi nke sistemu ịgba ọsọ ịgba ntụtụ ọ bụla bụ iduzi ihe na-esi na sprue ahụ banye n'oghere ebu.Usoro ahụ chọrọ nrụgide ọzọ iji mee ka ihe ahụ si na onye na-agba ọsọ mee ihe.
Kedu uru nke usoro ịgba ọsọ na-ekpo ọkụ?
Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ na-eme ka ọ dịrị igwe na-akpụzi mfe ịgbanye rọba n'ime oghere ebu.Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ na-abawanye ike nke igwe ịkpụzi.Ọ na-ebelata ogologo nrịba plastik ka onye na-akpụzi nwere ike ịchekwa ihe site n'ime ka akụkụ ndị dị gịrịgịrị ma dị ọkụ
Kedu ihe njirimara ebu a
E jiri nhazi bọọdụ AB mee ihe a na-akpụ akpụ wee wepụta ya site na ntụtụ ejector.Ọ nwere ike ịbụ mmepụta akpaaka.Ụzọ na-enye ndị na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ na-eri nri nwere ike belata usoro ịkpụzi injection ma chekwaa ihe plastik nke onye na-agba ọsọ, si otú ahụ belata ọnụ ahịa, melite àgwà ngwaahịa na ibelata ihe mkpofu.N'oge usoro ịkpụzi nke onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ, a na-achịkwa okpomọkụ nke plastik gbazere n'ụzọ ziri ezi na usoro ịgba ọsọ.Mwepụ nke usoro nleba anya na-enyere aka ịmepụta akpaaka.Gbasaa ngwa nke teknụzụ ịkpụzi injection.
Nke gara aga: Ahaziri FDA Grade Injection Molding PS Transparentplastic bottle
Osote: OEM elu ọkwa plastic injection ebu nke multifunctional njikọ